Myanmar Website Creator - About us
Current position : About Us - Company Info
Myanmar Website Creator BBS (MWC 掲示板)
back to topic list Admin Login
What are the stroung points of MWC? No.T000012 2011-05-27 21:01:05
Name: Moe Win Moe Email: ***************
What are the stroung points of MWC?
I want to study aboutawebsite for our association, so which pts we should be careful.....
Re: What are the stroung points of MWC? No.R000009 2011-05-27 21:03:37
Name: Moe Email: info@myanmarwc.com
ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသော Website တစ်ခုသည် အောက်ပါအချက်များနှင့် ပြည့်စုံရမည်ဟု Myanmar Website Creator မှယုံကြည်၍ ဤယုံကြည်ချက်အတိုင်းအစဉ်ကြိုးပမ်း ဖန်တီးပေးနေပါသည်။
Website တစ်ခုအတွက် အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ အခြားသူများအား မိမိ၏ထုတ်ကုန်/လုပ်ငန်းအကြောင်း သတင်း အချက် အလက် များကို ပြည့်စုံလျှင်မြန်စွာ တင်ပြပေးနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှလည်း မိမိတို့၏ Website များကို အစဉ်အမြဲဆန်းသစ်အောင်ဆောင်ရွက်လေ့ရှိကြသည်။သို့သော်လည်း တချို့ Website များမှာ လှပသော ရုပ်ပုံများ၊ သံစဉ် တေးသွားများ နှင့်ဖန်တီးပုံဖေါ်ထားသော်လည်း သတင်းအချက်အလက်များ မပြည့်စုံခြင်းနှင့် လျင်မြန်စွာdownload တင်ပြနိုင်မှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ များအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝ ပေးစွမ်းနိုင်စွမ်းမရှိသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။
Website များပြုလုပ်ရခြင်း၏ အခြားအရေးကြီးသော ရည်ရွယ်ချက်မှာ လုပ်ငန်းများကို ချဲ့ထွင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ လူကြီးမင်း၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် လုပ်ငန်းများအကြာင်းကို Website တွင်အသေးစိတ် ဖော်ပြခြင်းဖြင့် ဈေးကွက် ကိုပိုမိုချဲ့ ထွင်နိုင်ပါသည်။ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံခြားရှိ customers များက Website မှတဆင့် လူကြီးမင်းတို့နှင့် အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် contact&reservation formrsmများကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အသက် သွေးကြောဟုပင်တင်စားချင် ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ Website အချို့ တွင် contact /reservation form့ ပါဝင်သော်လည်း sending messages အတွက် function အစစ်မမှန်မရှိပါ။ MWC ၏ Web Hosting Service ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ contact/reservation function ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်မည်။ လူကြီးမင်းတို့၏လက်ရှိ Website တွင် contact /reservation function ကို ထည့်သွင်းရန် အလိုရှိသည်ဆိုပါကလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Website ၏ ဒီဇိုင်း၊ နေရာချတည်ဆောက်မှုပုံစံ ၊ နောက်ခံအရောင်အသွေး၊ စာပိုဒ်ခွဲခြင်းတို့ကို ဂျပန်နည်းပညာအတိုင်း ဖတ်ရှုသူ၏ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကို သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန်နှင့် ဆွဲဆောင်မှု ရှိစေရန် အဓိကထား ရေးဆွဲထားပါသည်။ တင်ပြသည့် အကြောင်းအရာများအား အမြဲခေတ်မှီ ဆန်းသစ်နေစေရန်၊ အရောင်အသွေးနှင့် fonts များမှအစ ဖတ်ရှုရာတွင် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုရှိစေရန် သုတေသနပြုချက်များစွာကိုကိုးကား၍ အလှပြ Websiteတခုသာမက အသုံးကျသော၊ ထိရောက်သော Websiteတခုဖြစ်စေရန် တီထွင်ဖန်တီးပေးပါသည်။
သတင်းအချက်အလက်များကို လျင်မြန်စွာ download တင်ပြပေးနိုင်ခြင်း
Website တစ်ခုအားဖွင့်ရန် အချိန်များစွာစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရသည့် အဖြစ်များကိုလူတိုင်းနီးပါး တွေ့ကြုံဖူး မည်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ထိုWebsite များနောက်ကွယ်တွင် ဒေတာပမာဏကြီးမားလှသောပရိုဂရမ်များကို မလိုအပ်ပဲ အလုပ်လုပ်နေစေသောကြောင့် လည်းကောင်း၊ ကြီးမားလှစွာသော ရုပ်ပုံများပါရှိခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားလှသော ထိုရုပ်ပုံများပါရှိမှသာ Website ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည် မဟုတ်ပါ။ လာရောက်ကြည့်ရှုသူအများစုမှာ သတင်းအချက်အလက်ကိုသာ လျင်မြန်ပြည့်စုံစွာ ရယူလိုကြခြင်းဖြစ်သည်။ MWC သည် မိမိကိုယ်ပိုင်Codeများဖြင့် Html နှင့် CSS ဖြင့်သာ Websiteကို အလှဆင်ထားပြီး ဖိုင်အတွင်းအသုံးမပြုသော ဒေတာများ၊ အမှိုက်များကို မိမိတီထွင်ထားသော softwareဖြင့် အားလုံးဖျက်ထားသဖြင့် အလွန်ပေ့ါပါးပါသည်။ လိုအပ်ပါက PHP နှင့်တွဲချိတ်၍ ရေးသားပေးခြင်းကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး Website ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်တာနက်အမြန်နှုန်းအနေအထားတွင်ပင် လျင်မြန်စွာ downloadလုပ်ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
တစ်ခါမှ Website မပြုလုပ်ဖူးသူများအတွက် အခက်အခဲအတွေ့ဆုံးမှာ contents ရေးသားခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ Website ကောင်း တစ်ခုသည် ပြီးပြည့်စုံသော သတင်းအချက်အလက်များကို မျှဝေခြင်းဖြင့် အသုံးပြုသူအား စိတ်ကျေနပ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သိသော်လည်း လိုက်နာရန်ခက်ခဲပါသည်။ MWC ၏ Ph.D.ပညာရှင်များက ကိုးကားသင့်သော Website များ၊ ဖတ်ရှုလေ့လာသင့်သော စာတမ်းများကို ရှာဖွေစုဆောင်းပေးပြီး ပြီးပြည့်စုံသော Website တခုဖြစ်စေရန် ပူးပေါင်းကူညီလျက်ရှိပါသည်။
Customers အများစုသည် Website များကို Search Engines (Google /yahoo) မှတဆင့် ရှာဖွေလေ့ရှိကြသည်။ ထိုသို့ရှာဖွေရာတွင် လူကြီးမင်းတို့၏ Website များကို အခြားwebsite များထက်အစောဆုံး အလျှင်မြန်ဆုံးရှာဖွေတွေ့ ရှိနိုင်ရန် Myanmar Website Creator မှ အထူးအလေးပေး ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ Search Engines၏ အလုပ်လုပ်ပုံ သဘောသဘာဝကို ကြေညက်စွာ သိရှိထားသည့် အတွက် Key wordများ၊ ခေါင်းစည်းများ၊ contents ရေးသားခြင်းများက
back to topic list 1
Write comment to this topic
Note: All the Items with "*" are required.
(Picture format: jpg, gif, png; Size: width≦640 height≦480)
(please check the inputted data, it can not be revised after submision.)